VPAs နှင့် FLEGT လုပ်ငန်းစီမံချက် | FLEGT
VPA ဆိုတာ ဘာလဲ။/
VPAs နှင့် FLEGT လုပ်ငန်းစီမံချက်/
VPAs နှင့် FLEGT တို့၏ လုပ်ငန်းလျာထားချက်
မိမိဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း သဘောတူညီချက်များ (VPAs) သည် ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် EU သစ်တောဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်မှု၊အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့် ကုန်သွယ်ရေး (FLEGT) လုပ်ငန်းစီမံချက် တွင်ပါ၀င်သောအခြေခံကျသည့် လိုအပ်ချက်များအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး တရားမဝင်သစ်ခုတ်ခြင်းကို ကိုင် တွယ်ဖြေရှင်းရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ EU သည် FLEGT လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို စတင်ရခြင်းမှာ တရားမဝင် သစ်ခုတ်ခြင်းကြောင့် လူမှုဘဝ၊ စီးပွားရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများအပေါ် နိုင်ငံတကာမှ စိုးရိမ်မှုများမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်များတွင်နိုင်ငံတကာမှ တရားမဝင်သစ်ခုတ်ခြင်းကို ကိုင်တွယ်ရန်အတွက် သစ်တော စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း၊ ဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တို့အပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့သော်လည်း ကုန်သွယ်ရေးမပါဝင်ခဲ့ပါ။ ၎င်းကြိုးပမ်းမှုများသည် တရားမဝင်မှုကိုမရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် ဥရောပ သမဂ္ဂမှ တရားမဝင်သစ်ခုတ်ခြင်းကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ကုန်သွယ်ခြင်းကို အကြောင်းရင်းခံ တစ်ရပ်အဖြစ် လက်ခံခဲ့ပြီး မူဝါဒတွင်ထည့်သွင်း ရေးဆွဲရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ကုန်သွယ်ခြင်းသည် ထုတ်လုပ် သည့်နိုင်ငံများနှင့် အီးယူ စျေးကွက်အတွင်း စီစစ်အတည်ပြု ထားသော တရားဝင်ထုတ်ကုန်များအတွက် ခိုင်မာပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသည့် မက်လုံးများကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ EU ၏ FLEGT လုပ်ငန်းစီမံချက် တွင်ဝယ်လိုအားနှင့် ရောင်းလိုအား နှစ်ဖက်လုံးမှ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ထည့်သွင်း ထားသည်။
၂၀၀၅ EU FLEGT စည်းကမ်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကောင်စီ ညွှန်ကြားချက်များအရ ဥရောပကော်မရှင်အား သစ်ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံများနှင့် VPAs ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် EU တာဝန်ရှိသူများအကြား FLEGT လိုင်စင်ရရှိထားသည့် ထုတ်ကုန်များကို VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံများထံမှသာ ဝယ်ယူသည့် စည်းမျဉ်းကို ချမှတ်နိုင်သည့် အာဏာပေးအပ်ထားပါသည်။
အခြား ဥပဒေပြဌာန်းမှု။ ဥပမာ ၂ဝ၁၃ EU သစ်တောထွက်ပစ္စည်းစည်းမျဉ်းများသည် EU သစ်တင်သွင်းသူများအား ထိုက်တန်သောကြိုးစားအားထုတ်မှုပြုထားသည့်စနစ် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ အဖြစ်မကြာခဏ ကိုးကားခံရသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ချမှတ်လိုက်နာ စေပြီး ၎င်းတို့၏ သစ်နှင့် သစ်ထွက်ပစ္စည်းများ တရားဝင်ကုန်သွယ်ခြင်းကို သေချာစေပါသည်။
တရားမဝင် သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ကိုင်တွယ်လိုသည့် သစ်တင်ပို့သည့် မည်သည့်နိုင်ငံကိုမဆို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
သစ်နှင့် ပတ်သက်သော ပုဂ္ဂလိကများမှ မိမိတို့ဆန္ဒအလျှောက် ကုမ္ပဏီအတွက် လိုက်နာရမည့် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာတရား ရေးဆွဲခြင်းစသည့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ အစပြုခြင်းကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးသည်။
တရားဝင်ထုတ်ကုန်များကိုသာ ရင်းမြစ်အဖြစ်ရှာဖွေသည့် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုန်ပစ္စည်း ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာမူဝါဒကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
တရားမဝင် သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းအပေါ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မပြုလုပ်စေရန် ကြိုးပမ်းချက်ဖြစ်သည်။
လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေသည့် ''ပြဿနာပွားစေသော သစ်' ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးရန် ရည်ရွယ်သည်။
EU FLEGT လှုပ်ရှားမှုအစီအစဥ်ကဘာလဲ။
European Commission. 2012. Combatting illegal logging: Lessons from the EU FLEGT Action Plan. [PDF ဒေါင်းရန်]
European Union. 2007. FLEGT Briefing Note 01: What is FLEGT? European Union. [PDF ဒေါင်းရန်]
European Union. 2007. FLEGT Briefing Note 02: What is legal timber? European Union. [PDF ဒေါင်းရန်]
European Union. 2007. FLEGT Briefing Note 06: Voluntary Partnership Agreements (VPA). European Union. [PDF ဒေါင်းရန်]
မသက်ဆိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းချက်။ VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများတွင်ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာ များသည် EU FLEGT Facility ၏ အတွေ့အကြုံများနှင့် သင်ခန်းစာများအပေါ် မူတည်၍ ရေးသားပြုစုထားခြင်းဖြစ်သဖြင့် Facility အပေါ်တွင်သာအပြည့်အဝတာဝန်ရှိသည်။ မှတ်ချက် သို့မဟုတ် မေးခွန်းများအတွက် အောက်ပါအီးမေးလ်မှ တဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ info@euflegt.efi.int